Home Wararka Mutlaq B. Majid oo ku soo beegan Muqdisho? Wadahadalka Kenya & Soomaaliya...
Mutlaq B. Majid oo ku soo beegan Muqdisho? Wadahadalka Kenya & Soomaaliya oo dib loo furayo
Waxaa la filayaa in uu dhawaan safar aan la shaacin uu Muqdisho ku yimaado lataliyaha Amiirka dalka Qatar Mutlaq bin Majid Al Qahtan.ninkaan oo horay ugu guulaysaty in uu dib u soo celiyo xiriirka labada dal ayaa la filayaa inuu dib u bilaabo wadahadalka la xiriiira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka bada ee labada dal.
Safarka wakiilka ayaa ku soo aadayo iyada oo ay maalintii talaadada ay maxkamada caalamiga ay go’aamisay dacwadii badda ee u dhaxeeysay Soomaaliya Kenya. Qatar ayaa horay heshiis ula gashay dalka Kenya in ay soo saarto shidaalka ku jira badda u dhaxeeysa Soomaliya iyo Kenya.
Wakiilka ayaa sidoo kale la filaya in uu safar ku tago dalka Kenya, isaga oo halkaas kula kulmi doona madaxweynaha dalka Kenya Uhurra Kenyatta. Dhanka kale, waxaa asbuucaan jooga magalaada Doha ee dalka Qatar wafdi ka socda dalka Kenya oo kala hadaya dowlada Qatar arimaha badda ee Soomaaliya iyo Kenya.